Oppa Burma Style - THIT HTOO LWIN
Oppa Burma Style Oppa Burma Style (Parody) It just for funny and we shot this clip within three hours . :) And also we are not professional dancers .Thanks
for watching﻿ ... Love ya all ... :D
We do not own this song . Credit to original singer PSY .
Oppa Burma Style(Parody)!!!!It is very Funny.
လူတွေကလည်း အတုခိုးချတာမြန်လိုက်တာ..သူများလို လိုင်းအသစ်ဖောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါလား.မရှက်ကြဘူးလားဗျာ. အရှက်တရားလေးတော့ရှိသင့်တယ် ဗြောင်ကြီး ခိုးတာဘဲ..ရိုက်တဲ့သူရော သရုပ်ဆောင်ရောအံ့သြတယ်
how shameful ... Reply
ဟာသ လုပ်တာ ရှင်းပါတယ် မူရင်း က သွယ်သွယ်လှလှမိန်းခလေး နေရာလိုမျိုးမှာ လာလာချင်းပဲ ၀တုတ်မ ကိုထည့် ထားတယ် အဲ Rapper ကို ခွရပ်ပြီး တံခါးဖွင့် ကတဲ့ လူကတော့ ကတာတော့ ကြည့် လိုက်ပါ အုံး နိုင်းရရင်.........နောက်ဆုံး လေးဘက်ထောက်တာတော့ လွန်လွန်းတယ်.....
တော်ပါတယ် အတုခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာဖြစ်ဖြစ် သီချင်းတစ်ပုပ် ကိုဆုံးအောင် ရိုက်ဖို့ ၊နောက်ခံသီချင်းထည့်ဖို့ ကမ်မရာအယူအဆနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် ကိုဂရုမစိုက်ပဲ ရိုက်နိုင်တယ့် သတ္တိ စတာတွေဟာ အပျော်တမ်းသမားတွေအတွက်မလွယ်ပါဘူး Congratulation ပါ မြန်မာ
ဒါအပျော်သက်သက်ရိုက်ထားတာ မြန်မာပြည်တခုထဲမဟုတ်ဘူး တကမ္ဘာလုံးက အဲဒီသီချင်းအတိုင်းလိုက်တု လိုက်ကနေကြတာမတွေ့ဘူးလား ဗမာလူမျိုးဆိုတာ သူတပါးကိုကဲ့ရဲ့ဖို့ကအရင်ဘဲ ကိုရီးယားမလေးတွေလိုသာ ဗမာမလေးတွေ စကပ်တိုတို ဘောင်းဘီတိုတိုနဲ့ ကုန်းကုန်းကြီးများ ကရင် ဘယ်လောက်များ မှိုချိုးမျစ်ချိုးဝိုင်းပြောကြမလဲမသိဘူး. Reply
တိုင်းပြည်အတွက် ရခိုင် အရေအခင်း လှုပ်ရှားနေတာလား